Itoobiya Oo Ka Hadashay Sababta Al-Shabaab Weerar Uga Gaysan Wayday Dalkeeda | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Itoobiya Oo Ka Hadashay Sababta Al-Shabaab Weerar Uga Gaysan Wayday Dalkeeda
Itoobiya oo ka mid ah dawlada ciidamadu ka joogaan Soomaaliya xuduud aad u dheerna la wadaagta, ayaa ka hadashay qaabka ay uga hor tagto in Al-shabaab weeraro ka fuliyaan gudaha dalkeeda.
Danjiraha dawlada Itoobiya u fadhiya dalka Kenya Dina Mufti oo la hadlay wargayska The Standard ayaa sheegay in dawladiisa ay qaaday talaabooyin adag oo ay hortagayso inay dhulkooda ka ilaaliyaan Al-Shabaab.
Talaabooyinka la qaaday ayuu sheegay inay ka mid yihiin in dadka Itoobiyaanka ah ay ka tirsan yihiin hay’adaha sirdoonka dawlada oo ay xogaha la wadaagaan dawlada, taasoo uu sheegay inay wax badan ka tartay sugida amaanka dhulka Itoobiya.
“Annagu waxaan Soomaaliya la leenahay xaduud ka dheer tan ay Kenya la wadaagto Soomaaliya, haddana nooma yimaadaan oo nama weeraraan argagixisadu sababta ma taqaanaan, waxa weeyaan muwaadin kasta oo Itoobiyaan ah waa sarkaal nabad sugida ka tirsan” ayuu yidhi Dina Mufti.
Mufti waxaa uu sidoo kale sheegay in dadka degan dhulka xaduuda ka tirsan ay wada shaqayn wanaagsan la leeyihiin hay’adaha amaanka waxa ay tuhmaana ay dawlada ku wargaliyaan sida uu yidhi.